Muenzi weHawaii Anoshandisa kuUS $ 1.44 Bhiriyoni Asi Pazasi Pekutangira-Denda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Muenzi weHawaii Anoshandisa kuUS $ 1.44 Bhiriyoni Asi Pazasi Pekutangira-Denda
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Hawaii Tourism: Mari yevaenzi yakawedzera kusvika pamadhora 1.46 mabhiriyoni munaFebruary 2020
Vashanyi vanga vachisvika muHawaii padhuze nematanho epamberi pehutachiona - vanenge 26,000 vafambi vari kusvika zuva nezuva. Asi zviverengero zvinoratidza kuti ivo vari kuwedzera kuchengetedza nemari yavo yekushandisa.
Mari yese yevaenzi muHawaii yevashanyi vanosvika muna Chikumi 2021 yaive US $ 1.44 bhiriyoni. Izvo zvichiri pazasi paJune 2019 apo mari yevaenzi yaive US $ 163 bhiriyoni - kuderera kwe11.9 muzana.
Hapana nhamba dzaivepo dzekushandisa kwevaenzi munaJune 2020.
Aya ekutanga manhamba akaburitswa pamwe chete neDhipatimendi reBusiness, Economic Development uye Tourism (DBEDT) uye Hawaii Tourism Authority.
Kuburikidza nemwedzi mitanhatu yekutanga ya6, mari yese yevaenzi yaive US $ 2021 bhiriyoni. Kana tichienzanisa, izvi zvaimiririra kuderera kwe4.86 muzana kubva paUS $ 45.1 bhiriyoni yakashandiswa kuburikidza nehafu yekutanga ye8.86.
Vashanyi vanosvika 791,053 vakasvika nesevhisi yekuHawaiian Islands munaJune 2021, kunyanya kubva kuUS West neUS East. Isati yasvika pasirese COVID-19 denda neHawaiiZvinodiwa zvevafambi zvekuisa vanhu voga, zviwi zveHawaii zvakawana mari yekushanya nevashanyi mu2019 uye mumwedzi miviri yekutanga ye2020. Kana ichienzaniswa ne2019, vashanyi vanosvika munaJune 2021 vaive pasi ne16.5 muzana kubva munaJune 2019 kuverenga 947,112 vashanyi (mhepo uye rwendo). Mukuenzanisa, vashanyi chete 17,068 vakasvika nendege muna Chikumi 2020.
Vazhinji vevashanyi 2,751,849 vakasvika muhafu yekutanga ya2021, kukwira 27.6 muzana zvichienzaniswa nehafu yekutanga ye2020. Vasvika vese vaive 46.8 muzana yakaderera pane vashanyi 5,171,182 muhafu yekutanga ye2019.
Mukati maJune 2021, vafambi vazhinji vanosvika kubva kunze kwenyika uye vanofamba pakati-mudunhu vanogona kupfuura zvinotenderwa neHurumende kwemazuva gumi kuzvisarudzira neyakajeka mhedzisiro yeECVID-10 NAAT bvunzo kubva kune Anovimbwa Kuedzwa Partner vasati vaenda kuHawaii. kuburikidza nepurogiramu Yakachengeteka. Pamusoro pezvo, vanhu vakabaiwa jekiseni muHawaii vaigona kupfuudza hurongwa hwekuvharirwa kwehusungwa kutanga kwaJune 19, 15. Zvirango zvekufamba pakati-kumatunhu zvakasimudzwa zvakare kubva muna Chikumi 2021, 15. Sangano reUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rakamisa mitemo ngarava dzinoenda kuburikidza ne "Mamiriro Ekutyaira Sail."